बडी बनाउन पिनट बटर, अन्य के फाइदा गर्छ शरीरलाई ? – Health Post Nepal
बडी बनाउन पिनट बटर, अन्य के फाइदा गर्छ शरीरलाई ?
२०७५ फागुन २५ गते १२:४५
बडी बनाउन तपाईं के चाहिँ गर्नुहुन्न । अनेक किसिमका खानेकुरा खानुहुन्छ । शारीरिक अभ्यास गर्नुहुन्छ । अझ आजकाल बजारमा मांसपेशी बनाउने र तौल बढाउने विभिन्न खालका प्रोटिन पाउडर पाइन्छन् । तर यसमा कयौं प्रकारका हानिकारक तत्व र रसायन प्रयोग गरिएका हुुन्छ्न । यसबाट शरीर बलिष्ठजस्तो देखिएपनि तागत आउँदैंन । यदि साँच्चिकै बडी बनाउनु छ भने पौष्टिक पदार्थ खानुपर्छ ।
पिनट्स बटर बडी बनाउन सहयोगी साबित हुन सक्छ । विश्वभरका बडीबिल्डर्स र एथलेट्सहरु यसको सेवन गर्छन् । यसमा कयौं पोषक तत्व हुन्छन् । पोटासियम, म्याग्नेसियमसहितका तत्वहरुले भरपुर पिनट बटरले धेरै रोगबाट शरीरलाई बचाउँछ ।
यसमा प्रोटिन, फाइबर, हेल्दी फ्याट, पोटासियम तथा एन्टीअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ । एक चम्चा पिनट बटरमा ३ ग्राम एन्टीअक्सिडेन्ट अर्थात् भिटामिन ई पाइन्छ । यसका साथै यसबाट प्राप्त म्याग्नेसियमले हड्डी र मांसपेशीलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । साथै प्रतिरक्षा प्रणालीका लागि जरुरी भिटामिन बी ६ र जिंक पनि पाइन्छ ।
बढी चिल्लोका कारण अधिकांश मानिसहरु पिनट बटर त्यति प्रयोग गर्दैनन् । यसमा अनस्याचुुरेटेड फ्याट स्याचुरेटेड फ्याटभन्दा बढी हुन्छ । यसको अर्थ हो यसमा भएको चिल्लो स्वस्थकर हुन्छ । एक स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थकर चिल्लो पनि बढी आवश्यक हुन्छ ।
हेल्दी फ्याटले भरपुर
बढी चिल्लोका कारण अधिकांश मानिसहरु पिनट बटर त्यति प्रयोग गर्दैनन् । यसमा अनस्याचुुरेटेड फ्याट स्याचुरेटेड फ्याटभन्दा बढी हुन्छ । यसको अर्थ हो यसमा भएको चिल्लो स्वस्थकर हुन्छ । एक स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थकर चिल्लो पनि बढी आवश्यक हुन्छ । ओलिभ आयल, एभोकाडोजस्तै पिनट बटरमा पाइने चिल्लोलाई पनि राम्रो मानिन्छ ।
यसमा स्वस्थकर चिल्लो अर्थात् हेल्दी फ्याटका अतिरिक्त प्रोटीनकोमात्रा पनि भरपुर हुन्छ । प्रोटीन शरीरका लागि निकै जरुरी हुन्छ । यसमा क्यालोरी पनि पाइन्छ, जो शरीरका लागि पर्याप्त उर्जा दिन्छ । यति नास्तामा पिनट बटरको प्रयोग गरिन्छ भने दिनभर काम गर्नका लागि उर्जा मिल्छ ।
फाइबरको महत्वपुर्ण स्रोत
दुुई चम्चा पिनट बटरमा दुुई ग्राम फाइबर पाइन्छ । फाइबरको प्रचुर सेवन शरीरका लागि निकै जरुरी मानिन्छ । यसबाट शरीरको पाचन क्रिया पनि राम्रो हुुन्छ । अन्य स्रोतबाट पनि फाइबर पाइन्छ, पिनट बटर पनि यसको सप्लीमेन्टको काम गर्न सक्छ । यसैले पिनट बटर बिहानको नास्तामा लिनुपर्छ ।
मुटुु रोगीका लागि उपयोगी
अधिकांश मानिसहरु आजकाल बढी सोडियम बढी प्रयोग गर्छन् । तर यो मुुटुुको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । पिनट बटरमा पोटासियमको मात्रा बढी हुन्छ र पोटासियम सोडियमको खतरा कम गर्न उपयोगी मानिन्छ ।